BEBETO JIOLAHY RAINDAHINY AO TOAMASINA : Votsotra ny menoty rehetra natao taminy
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny polisy ao Toamasina manoloana ny firongatry ny fanafihana mitam-basy tao ho ao izay. 13 octobre 2018
Ny alarobia 10 oktobra lasa teo, dia voasambotra teny amin’ny faritra Pont Mainty Rajerison Monja, fantatry ny maro amin’ny solon’ anarana hoe Bebeto. Jiolahy izay efa kalaza amina fanaovana fanafihana mitam-piadiana ao an-drenivohitr’i Betsimisaraka. Araka ny fanazavan’ny Kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys, dia efa naharaisana fitarainana maro io Bebeto io.
Faritra maro no anaovany ny asa ratsiny : Morarano, Tanambao-Verrerie, Cité Vohitsara, Pont Mainty, Mangarano, Andranomadio. I Bebeto izay kalaza fa efa mpamerin-keloka.
Manoloana ireo fitarainana sy fitoriana voarain’ny polisy momba azy, dia nisy ny fikarohana natao azy. Nanampy ny polisy tamin’ny fitadiavana an-dRajerison Monja ireo olon-tsotra tsara sitrapo mahalala ny mombamomba ity jiolahy raindahiny ity. Herinandro vitsy lasa, efa nifanenjehana teny amin’ny Rn2 bis iny izy saingy tafaporitsaka tamin’ny moto. Raha ny fanazavan’ny polisy, teo am-pitsoahana avy nanafika teny amin’ny faritra Anjoma sy Dépôt Analankininina iny izy no nifanenjehana. Moto no ampiasainy rehefa manao ny asa ratsiny ary manana fitaovam-piadiana. Tafaporitsaka i Bebeto nandritra io fanenjehan’ ny polisy azy io. Latsaka kosa ny findainy. Niainga avy tamin’ ny fahitana io findainy io ny fikarohana rehetra ka izao niafara tamin’ny fahatrarana azy izao.
Mampiasa ody mahery
Araka ny angom-baovao, dia anisan’ireo jiolahy mampiasa karazana ody mahery fampiasa amin’ny asa ratsy Rajerison Monja. Tamin’ny fotoana nahatrarana azy ny alarobia 10 oktobra, dia votsotra foana izay menoty apetraka aminy. Nisy mihitsy ny fepetra manokana noraisin’ny polisy nahatonga ny fana-fodiny lefy sy tsy nahafahan’ny menoty nivaha intsony.
Anisany vokatra azon’ny polisy tamin’ity herinandro nivalona ity koa ny fahatrarana an’i Judicaël na Kawitry no ahaizan’ny maro azy. Ity farany izay jiolahy anisany atahorana. Jiolahy mpampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika. Miara-miasa amina jiolahy namany izy amin’ny asa ratsy ataony. Izany hoe tsy mandeha irery. Tamin’ny fotoana nahatrarana azy, dia mbola tratra teny aminy ny bala maromaro.
Nandritra ny fampahafantarana ireo vokatra ireo tamin’ny mpanao gazety ny zoma 12 oktobra, tsy nitsahatra nanao antso avo amin’ny mponin’i Toamasina ny polisy mba hazoto hanome vaovao azy ireo. Nisy ny fanentanana natao ho an’ireo sefo fokontany mba ho tonga haka ny sarin’ireo jiolahy karohina. Fantatra mantsy fa mbola misy an’izany Fano sy Joseph Emile izany karohina fatratra. Izy roalahy izay naman’i Bebeto. Any amin’i Fano sy Joseph Emile io no mipetraka ireo fitaovam-piadiana fampiasan’i Bebeto.
BEBETO JIOLAHY RAINDAHINY AO TOAMASINA
2018-10-18 18:53:04 par
mila mat iz